8 aghụghọ ịzọpụta oge na ọdụ ụgbọ elu nche akara | Akụkọ Njem
Maria | | Ụlọ elu, Atụmatụ, njem
Mgbe ọ bụla anyị ga-agbapụ, anyị na-eche ndị na-ahụ maka nchekwa na ọdụ ụgbọ elu, usoro na-agwụ ike nke gụnyere ịwụnye akpa anyị ma ọ bụ mepee akpa anyị iji gafere njikwa nchekwa.
Ọ bụ ya mere na Actualidad Viajes anyị chọrọ ịkụziri gị ụfọdụ ndụmọdụ bara uru ka ị nwee ike ịbanye n'oge kachasị dị mkpirikpi.
1 Gaa na ọdụ ụgbọ elu n'oge
2 Akpa aka, dị mkpa
3 Bipute ịbanye
4 Ikwado nche njikwa
5 NJ n'aka
6 Na-erubere ndị isi isi isi
7 Họrọ ọdụ gị nke ọma
8 Ihe amachibidoro na nche nche
Gaa na ọdụ ụgbọ elu n'oge
Gbalịa ịga ọdụ ụgbọ elu nke ọma tupu oge iji lelee oge nke ndenye ego ndenye ụgbọelu gị ma nwee ike ị nweta na-ezuteghị ogologo ahịrị.
Ọtụtụ mmadụ na-echere ruo oge ikpeazụ iji rute ọdụ ụgbọ elu. Nke a nwere ike ime ka ndị nche ego queues na-congested n'oge ụfọdụ na ngafe site na ha bụ nnọọ iji nwayọọ.
Site na ịbịarute n'isi ọdụ ụgbọ elu, ihe anyị chọrọ bụ ịchekwa oge, ọ bụghị igosipụta ebe ahụ ka ị chere na-enweghị isi.
Akpa aka, dị mkpa
O yiri ka ọ bụ ihe a na-apụghị ikweta ekweta mana ibu ibu na-eduga na igbu oge. Ga naanị akpa aka bụ otu n'ime ụzọ dị mfe iji chekwaa oge na ego mgbe ị banyere n'ọdụ ụgbọ elu n'ihi na ọ gaghị adị mkpa ịlele.
Okwu ọzọ dị mkpa iji mee ka usoro ịme ihe nchebe dị nfe bụ ibu mmiri (ncha ncha, ezé ezé, ịkpụ afụ ọnụ, deodorant spray, wdg) n'èzí akpa gị na akpa na-enweghị ntụpọ.
Ọ bụrụ n ’ịwụfuo nzọụkwụ a ma tinye mmiri mmiri n’akpa gị, na nche nchekwa ha ga-eme gị ibupụta akpa gị ma debe ha iche. Agbanyeghị na ọtụtụ ọdụ ụgbọelu na-enye akpa ndị a n'efu, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịchekwa oge ọ ka mma ka gị na nke gị bịarute ma jiri mmiri mmiri ahazi.
Ndenye aha ntanetị bụ usoro nke ụbọchị ahụ. Iji chekwaa oge ịbanye na ọdụ ụgbọ elu, ọ kachasị mma ibipụta akwụkwọ ikike ịbanye iji zere ahịrị. Nhọrọ ọzọ bụ na ị na-ebudata ya na ekwentị gị mana, ebe ọ bụ na mgbe ụfọdụ ngwaọrụ teknụzụ anaghị emebi emebi. ọ kachasị mma ị weta akwụkwọ.
Ikwado nche njikwa
Ọ nwere ike ịdị ka obere ihe mana ịchekwa oge na njikwa nchekwa ọ dị mkpa na ị nwere ihe ndị a rịọrọ na usoro ahụ. Nke ahụ bụ, mmiri mmiri, mbadamba, kọmputa, ekwentị mkpanaaka, wdg.
Ọ dị mkpa icheta itinye ihe ndị ị na-ebu na tray ahụkarị mgbe ị na-agafe njikwa iji zere ịbụ ndị ndị nche na-achọ.
N'otu aka ahụ, mgbe ị na-aba ụgbọ elu, ọ ga-adị mma ka ị yiri akpụkpọ ụkwụ dị mfe iwepụ n'ihi na n'ọtụtụ ọdụ ụgbọelu, ha na-amanye ndị njem ka ha yipụ akpụkpọ ụkwụ ha iji nyocha X-ray. ka ha na-agafe ụkwụ nche n’enweghị ụkwụ. Ọ bụ ya mere ọ ka mma iji zere akpụkpọ ụkwụ nwere eriri ogologo ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ siri ike nke na-eme ka usoro ahụ kwụsị.
Iji aka anyị (ID ma ọ bụ paspọtụ) ejiri akwụkwọ anyị onwe anyị bụ ihe nwekwara ike ịchekwa anyị oge na njikwa nchekwa.
Na-erubere ndị isi isi isi
Ọ bụrụ na ihe niile na-aga nke ọma, naanị ihe ị ga-eme bụ ịgafere nche otu mgbe. Agbanyeghị, n'ụgbọelu ụfọdụ, a na-ahọpụtakarị ndị njem maka usoro nyocha ọgwụ na-eme.
Soro ntuziaka ha niile ma chere ka ha nye gị ha. Egbula ime ka ha kwenye na ị na-eme ngwa ngwa n'ihi na omume ahụ ga-eme ka usoro ahụ kwụsị.
Foto | Foto CBP
Họrọ ọdụ gị nke ọma
Dabere na ndị gị na ha na-akọrọ kwụ n'ahịrị na njikwa nche, ọ ga-adị mfe ma ọ bụ ịghara ịchekwa oge ịbanye.
Gbalịa ịhọpụta ahịrị nke nwere ike ọ gaghị egbu oge. Nke ahụ bụ, otu na-enweghị ọtụtụ ezinụlọ nwere obere ụmụaka, ndị agadi ma ọ bụ ndị nwere obere mbugharị. Ha niile ga-achọ oge iji gafere X-ray ma nwee ike ịchọ enyemaka iji mezue usoro ahụ.
Ihe amachibidoro na nche nche
Dị ka ị ga-amarịrị ugbu a, anaghị ekwe ka eburu ụfọdụ ihe na akpa aka kama na igbe a na-enyocha. Ndepụta a gụnyere ngwaọrụ ọrụ, egbe ọkụ, sharps na ihe dị nkọ, ma ọ bụ kemịkal. Ọzọkwa ọkụ, akụrụngwa egwuregwu (raketị, klọb golf, skateboards, baseball bats ...) ma ọ bụ corkscrews.
Kedu aghụghọ ndị ọzọ ị maara nke nwere ike inye aka ịchekwa oge na njikwa ọdụ ụgbọ elu? Olee nke i chere kacha dị irè? Ma ọ dịkarịa ala? Kesaa echiche gị na ndị njem ndị ọzọ na ngalaba nkọwa!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Atụmatụ » Usoro 8 iji chekwaa oge na njikwa ọdụ ụgbọ elu
Ihe ị ga-eme ụbọchị atọ na Shanghai
Ebe 5 kachasị mma ịga njem naanị ọdịda a